​के हो युरिक एसिड ? कसरी बच्ने ?
सोमबार ३२, असार २०७५
युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो । यसलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ ।
यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ । यसले जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ । रगतमा युरिक एसिड बन्ने र युरिक एसिड पिसाबबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियामा गडबडी भयो भने रगतमा पर्याप्त मात्रामा युरिक एसिड घुल्न पाउँदैन र बिस्तारै गाउटको रुप लिन्छ । एउटा स्वस्थ मानिसमा युरिक एसिडको मात्रा ६ दशमलब ८ एमजी रडिएल हुनुपर्छ ।
युरिक एसिड बढी देखिएमा जोर्नीको दुखार्इ नहुन सक्छ । यस्ता व्यक्तिलाई गाउट नभएर ‘हाइपरयुरेसिमिया’ भएको हुन सक्छ । त्यसले जोर्नीमा असर गर्दैन । जसलाई युरिक एसिड भएकै कारण जोर्नी (खुट्टाको बुढी औँला र आसपास) मा दुख्छ, त्यो गाउट हो भनेर बुझ्नुपर्छ । युरिक एसिडबाट हुने बाथरोग नै गाउट हो । यो वंशाणुगत समस्या पनि हो ।
युरिक एसिडको सुरुवातमा खुट्टाको बुढी औँला र त्यसको आसपासको जोर्नीहरु दुख्न थाल्छ । यसलाई ‘मेटाटार्सल जोइन्ट’ भनिन्छ । प्रायः राति सुतेको बेला जोर्नीहरु अत्याधिक दुख्ने गर्छ र बिहान उठ्दा सुन्निएको हुन्छ ।
सुरुसुरुमा खुट्टाको बुढी औँलामा मात्र हुने दुखाइ समयमा उपचार नहुँदा अन्य ठूला जोर्नीहरुमा पनि सर्न थाल्छ । युरिक एसिड भएको थाहा नपाएकाहरुलाई रातो मासुको अधिक प्रयोग र मध्यपान सेवन गर्दा एक्कासी बुढी औँलाको जोर्नी सुन्निने र दुख्ने समस्या आउँछ ।
– गुलियो पदार्थ वा यस्ता अन्य पेय पदार्थको प्रयोग कम गर्ने
– धूम्रपान र मध्यपानबाट टाढै बस्ने
– प्युरिन तत्व बढी हुने रातो मासु, गेडागुडी, गालेको अचार, फुलगोभी, च्याउ, पालुङ्गोको सेवन कम गर्ने
– पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने । तर, मुटुका बिरामीले भने पानीको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पिउनुपर्छ ।
– नियमित औषधिको प्रयोग गर्ने
– शरीरको वजन घटाउने
– समय–समयमा चिकित्सकको परामर्श लिने
– खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरु सुन्निनु
– दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु
– जोर्नी राति बढी दुख्नु
– लामो सयम युरिक एसिडको समस्या भएकालाई घुँडा, कुइनो लगायतका जोर्नीहरुमा पनि दुख्नु ।
– ज्वरो आउनु, आदि
​यसकारण खानुहोस् नियमित अदुवा
​मोटोपना घटाउन नियमित खानुहोस् यी फलफूल
​जान्नुहोस् यी चीज सुँघ्दा घट्छ तौल, यस्तो छ कारण